Myanmar Defence Weapons: တပ်မတော် (လေ)တွင် မစ်-၂၉ တိုက်လေယာဉ် (၃၀) ကျော်ပြီလား
Zeus December 15, 2012 at 4:08 PM
MIG 29 SMT ပါ။ Pilot seat နောက်က humpback က အပိုဆီ သယ်အားကောင်းအောင် SMT တွေမှာ modified လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ MIG 35 ကသွယ်ပါတယ်။ဒီlink ကပုံကိုကြည့်ပါ။
htet December 16, 2012 at 6:02 AM
4th generation+ fighter MIG 29 SMT fighter ....sure
sanaythar December 16, 2012 at 9:15 AM
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလိုက်တာဗျာ။ ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။ တစ်ကယ့် သုတေသီပေပဲ။ လေးစားပါတယ်။ ကိုမိုးမြင့်/
သတိထားကြည့်ကြပါဦး၊ တောင်ပံကနှာပေါက်တွေနေရာ အရင်အုပ်တွေနဲ့မတူဘူး။ ၃၅ ကကော ၂၉နဲ့ဆင်သလား။ ဒါပြီးမှရှာကြည့်ရဦးမယ်။
aungaung December 16, 2012 at 11:52 PM
i saw 2736 in video that wai hin chit thu uploaded on facebook
koko superdanger December 17, 2012 at 2:59 AM
MIG-29 SMT ပါခင်ဗျာ။ MIG-35 မှာ နောက်ကျော "မ" ခုံးပါ သွယ်ပါသည်။ အမြှီး ပုံစံ Vertical Stabilizer ကွာပါသည်။ အမြှီးအောက်ခြေ(အရှေ့ နှင့် အနောက်) သည် MIG-29 များနှင့် MIG-29SMTများ တွင် ရှည်ပြီး အတောင်ပေါ်အထိရောက်ပါသည်။ MIG-29UB (2716 ပုံကြည့်) နှင့် MIG-35 တို့တွင် အမြှီးအောက်ခြေ(အရှေ့ နှင့် အနောက်)သည် တိုပါသည်။ တချို့ MIG-29SMT များတွင် ပျံသန်းစဉ် ဆီဖြည့်ရန် In-flight Refueling Probe ဆီဖြည့်တံ များ လေယာဉ် ၏ ဘယ်ဘက် တွင်ပါရှိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့လေတပ်မှ MIG-29SMT များတွင် In-flight refueling system မပါရှိနိုင်လောက်ပါခင်ဗျ။
စိန်ရဲဒင်း December 21, 2012 at 10:26 AM
ရန်ပုံခွင်း သွေးသောက် December 21, 2012 at 6:49 PM
MIG - 35 တွေ ၀ယ်စေချင်တယ်ဗျာ ... Generation 4++ ဆိုတော့ ဝေဟင်ပိုင်နက်ကို အတော်လေး ကာကွယ်နိုင်စွမ်း ရှိမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် ... နောက်ပြီးတော့ ဒေသတွင်းလေတပ်တွေနဲ့က အဲဒီလောက်အရည်အချင်းနဲ့မှ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိပါလိမ့်မယ် ... UAV ပရောဂျက်ကိုလည်း အရှိန်အဟုန်နဲ့ လုပ်စေချင်ပါတယ် ... ဒါမှ ကျွန်တော်တို့ လေပိုင်နက်ကို ကောင်းကောင်းကာကွယ်နိုင်မှာပါ ...
aye min December 29, 2012 at 9:19 AM
အမေရိကန်ကိုအသနားခံပြီးတော့ F22 (10)စီးလောက်တောင်းဝယ်သင့်တယ်
MM December 29, 2012 at 1:58 PM
F22 ကို ဘယ်နိုင်ငံမှ မရောင်းပါဘူးဗျ...။ အမေရိကန်ကိုလည်း အသနားခံစရာမလိုပါဘူး...။
than win tun December 31, 2012 at 6:55 AM
bk.bekii January 2, 2013 at 7:56 AM
KO MM ခင်ဗျား နိူင်ငံတိုင်းလိုလို မှာကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းနဲ့ တိုက်လေယာဉ်တွေရှိပါတယ် ဥပမာ - F-22(U.S.A),SU-27(Russia),J-10(china),...စသဖြင့်ပေါ့ မြန်မာ့လေတပ်မှာရော ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်တဲ့ဒီဇိုင်းရှိပါသလား? ထုတ်လုပ်ဖို့ေ၇ာအစီအစဉ်ရှိပါသလား ?
နမောတဿ ဘဂ၀တော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ January 12, 2013 at 5:28 AM
မရောင်း ဘူး ဂျပန်ကို အလကား ပေးထား တယ် လေ အိုကီနာဝါမျက်နှာနဲ့ပေါ့
ဗထူး January 29, 2013 at 3:20 AM
ဒေသတွင်းက နိင်ငံတွေက လေတပ်အင်အားဘယ်နိင်ငံ ကပိုကြီးလဲဆိုတာပြောပြပေးပါလား ပြီးတော့ MIG-29 သို့MIG-35 တို့ ထက်ပိုသာတဲ့တိုက်လေယာဉ်တွေ နည်းပညာတွေကော် ၀ယ်ဖို့ အစီအစဉ်ကော်ရှိလားမရှိဘူးလား ဆိုတာကော်ပြောပြပေးပါနော် ပြည်တွင်းမှာကော်အဆင့်မြင့််တဲ့ လေယာဉ်တွေကော်ထုတ်လားပြောပြပေးပါနော် လေးစားစွာဖြင့် ကိုMM